Ciidamo dheeraad ah oo la geeyey Xarunta Baarlamaanka, Maxaase keenay kordhinta cusub? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Ciidamo dheeraad ah oo la geeyey Xarunta Baarlamaanka, Maxaase keenay kordhinta cusub?
Ciidamo dheeraad ah oo la geeyey Xarunta Baarlamaanka, Maxaase keenay kordhinta cusub?
Ciidamo dheeraad ah oo katirsan kuwa Ammaanka ee Puntland ayaa la geeyey xarunta baarlamaanka, sidaas oo kale waxaa la geeyey baabuurta maxaabiista lagu qaado, iyadoo ay warar kala duwan ka soo baxayaan sababaha arrintan ka dambeeya.
Warar aan helnay ayaa sheegaya in ujeedada loo keenay ciidamo cusub ay tahay in cabsi laga qabo in rabshad ay ka dhacdo gudaha Aqalka baarlamaanka, marka la gaaro furitaanka kalfadhiga golaha ee nagu soo aadan.
Gudoomiyihii ay xilka ka qaadeen mudanayaasha baarlamaanka Puntland ayaa wararku sheegayaan in ay suuragal tahay in uu tago kalfadhiga baarlamaanka ee Isniinta nagu soo aadan.
Taasi, waxay cabsi galisay ciidamada Ammaanka iyo Xukuumadda oo rabshad dhacda ka welwel-qaba, waxaana wararku sheegayaan in sidaas awgeed loo geeyey ciidamadan.
Sidaas oo kale xog ka madax banaan dhinacyada ayaa sheegaya in xildhibaanada qaarkood oo taageersan CabdiXakiim Dhooba-Daareed cabsi laga qabo in ay ficilo ka dhex sameeyaan golaha baarlamaanka oo ay diideen furitaanka kalfadhiga nagu soo wajahan.
Xildhibaano gaaraya 12 xubnood ayaa ka soo horjeesan doona go`aankii baarlamaanka, marka la gaaro maalinta Isniinta ah oo ay sheegeen in fasaxoodu ku e’eg yahay, waxayna sheegeen in ay ka walaacsan yihiin hab dhaqanka baarlamaanka.
Gudoomiye kuxigeenka 1aad Cabdicasiis Cabdullaahi ayaa ka welwelsan talaabada dhacday, isagoo laftirkiisa caqabad weyn ka aaminsan in ayku soo socoto, gaar ahaana in Mooshin laga keeno doono si loogu bedelo mudane katirsan baarlamaanka oo isna jooga.